Faalloyinka – Page 2 – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Kenya oo Diiday inuu ka dhaqan galo Kismaayo Heshiiskii ay la gashay Farmaajo “Duulimaadyada Kismaayo waa Mamnuuc”.
Dowladda Kenya ayaa amar cusub ku soo rogtay diyaaradaha ka duuli jiray Garoonka diyaaradaha ee Magaalada Kismaayo islamarkaana toos u tagi jiray magaalada Nairobi ee caasimadda Waddanka Kenya. Hay’adda Duullimaadka rayidka Kenya ayaa sheegtay in […]
Akhriso:- CCWarsame oo sheegay in DFS ay isku dayday Dilkiisa iyadoo adeegsanaysa Argagaxisada + Xisbigiisa oo war Culus soo saaray.
Siyaasiga C/Raxmaan C/shakuur Warsame ayaa sheegay in dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ay ogolaatay in isaga la dilo kaddib markii ay Xasan Daahir Aweys u ogolaatay in uu ku baaqo dilkiisa. C/Raxmaan oo Twitter-ka soo […]
Alshabaab oo Calankoodi ka taagay deegaan Muhiim ah oo kuyaal Dalka Kenya “Xagee qabteen Kenyaakii deganaa?”.
Wararka aan ka heleyno deegaan duleedka ka ah Magaalada Gaarisa ee Gobolka Waqooyi badan ee dalka Kenya ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaas ay la wareegeen dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab, kadib dagaal dhacay. Al-shabaab ayaa […]
Odayaasha Dhaqanka Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ayaa waxaa ay beeniyeen warar ay baahiyeen saraakiil ka tirsan Maamulka Puntland ee uu hoggaamiyo Siciid Cabdullahi Deni. Odayaasha oo shir ku yeeshay Boosaaso ayaa beeniyay in […]
Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaa ka taagan Khilaaf ka dhex qarxay wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan iyo guddoomiyaha gobolka Bari, Cabdisamad Yuusuf Maxamed (Cabdisamad Abwaan). Labada masuul ayaa sida la sheegay isku […]
DAAWO:- Xildhibaan Laba Arin oo Macquul ah ku eedeeyay Farmaajo, Kheyre iyo Cumar Finish.
Madaxda ugu sareysa Dowladda Federaalka ah ee Somalia ayaa lagu eedeeyay in ay dhibaato tos ah kuhayaan Shacabka kunool Magaalada Muqdisho taas oo ay ka hadleen qaar kamid ah xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somalia. […]
Taliyaha Ciidanka Booliiska dowladda Puntland S/Gaas muxiyadiin Axmed Aw-Muuse ayaa shaqada ka joojiyay Taliyaha Qeybta Booliiska gobolka Nugaal G/sare Mu’min Cabdi Shire. Ilo’ dhanka Amniga ah oo warkan u xaqiijiyay Warbaahinta ayaa sheegaya in labada […]
DAAWO:- Musharax Xildoon ah oo Balanqaaday Hadii la doorto in uu Ciribtiri doono Cayayaanka loo yaqaan AYAXA
Mid kamid ah Musharixiinta Madaxtinimada Galmudug ayaa markii ugu horreysay kahadlay arin aysan wali kahadlin musharixiinta isaga la loolamaya iyo guud ahaanba siyaasiyiinta kasoo jeeda Deegaanada Galmudug. Musharaxaan oo lagu magacabaao Cabdiraxmaan Odawaa sidoo kalena […]
DAAWO:- USA oo Lacag aan caadi ah ku raadinaysa Ameerikaanka ugu sareeya ee katirsan Alshabaab.
Dowladda Mareykanka ayaa shaacisay lacag abaalgud ah oo ay siineyso ciddii soo sheegta xog horseedi karta in la xiro Jehad Serwan Mostafa oo u dhashay Dalka Mareykanka. Jehad Serwan Mostafa ayey dowladda Mareykanka sheegtay in […]
DAAWO:- Puntland oo magac Cajiib ah ubixisay Ciidamadii dhawaan ka goostay ee ku biiray Somaliland
Maamulka Puntland ayaa markale kahadlay ciidamadii dhawaan sheegay in ay ka goosteen kuna biireen Somaliland kuwaas oo ay Puntland magac kale ku sheegtay. Taliyaha guutada 26-aad ee ciidanka Daraawiishta Puntland, S/ Guuto Maxamuud Maxamed Axmed […]
Taliska Ciidanka Xooga Puntland ee loo yaqaan PSF ayaa markii ugu horreysay ka hadlay warar maalmihii dambe la isla dhex marayay oo sheegayay in Ciidamadooda ay soo faarujiyeen furimihii dagaalka ee ay ku sugnaayeen. “Ciidamada […]
Degdeg:- DFS oo hadda soo saartay Digniin qatar ah oo ku wajahan Meelo kamid ah Somaliland iyo Puntland.
Dowladda Feraalka Soomaaliya, Waxa ay Qeybaha kala duwan ee Bulshada, Hay’adaha Samafalka iyo Dowladaha Saaxiibada ah la wadaageysaa dhibaatooyinka isbeddellada cimillada, gaar ahaan fatahaadaha iyo duufaanno la saadaalinayo in ay ku soo wajahanyihiin Deegaanno kamid […]
DAAWO:- Wasaaradda Deegaanka Puntland oo Shacabka la wadaagtay Cabsida ay ka qabto Roobabka la filayo inay Da’aan
Agaasimaha Waaxda qorshayta Wasaaradda Deegaanka, Beeraha iyo Isbedelka Cimilada Puntland Maxamed warsame oo Waraysi gaar ah aanu la yeelanay ayaa sheegay in Seddexda maalin ee soo socota Puntland ay kusoo wajahan yihiin Dabaylo iyo Roobab […]
DAAWO:- Duufaan aan Abid la arag iyo Roobab Dabeylo wata oo kusoo wajahan Puntland iyo Somaliland “Digniin Qatar ah”.
Sida ay sheegayaan warbixino cusub oo soo baxay waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay Duufaano xoogan ku dhuftaan meelo kamid ah Dalalka ay marto Badwaynta Hindiya. Duufaanadaan ayaa waxaa wehliya Roobab xoogan oo […]
Degdeg DAAWO:- Kacdoon Balaadhan oo ka dhan Maamulka Hirshabeele ayaa ka Curtay Hiiraan “MD Waare oo halis kujira”.
Wararka inaga soo gaaraya magaalada Buulaburde ee Gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in maanta halkaasi uu ka dhacay banaanbax balaaran oo ka dhan maamulka Hirshabeele. Boqolaal kamid ah shacabka Magaalada ayaa isugu baxay wadooyinka waawayn […]
Faalo:- Booqashadii Xingalool iyo Aragtidaydii Jidka U Dhexeeyay Badhan iyo Xiingalool “Waxbadan kabaro”
Abbaaro 05:30 Subaxnimo oo maalin Sabtiya ah kuna suntanayd 30tii November 2019ka ayaannu ka baxnay magaalada Badhan annaga oo u jeedna degmada Xiingalool, oo ka tirsan Gobolka Sanaag ee Maakhir -Soomaalia. Waddada Airpork ayaanu raacnay […]
Maanta oo kale 3 December 2009 waxa ay aheyd Maalin Murug ay Dad badani ay soo wajaday,waa Maalintii uu dhacay Qaraxii ay ku dhinteen Dad kor u dhaafayay 30 Ruux oo iskugu jiray Arday,Dhaqaatiir,Wasiiro,Waalidiin iyo […]
Degdeg:- Puntland oo maxkamadaynaysa Odayaal iyo Siyaasiyiin lagu xirxiray Boosaaso “Maxaa loo haystaa”.
Maxkamadda Darajada koowaad ee Gobolka Bari ayaa lagu wadaa in maanta la soo taago odayaashii iyo siyaasiyiintii ku xirnaa saldhiga bartmaha magaalada Bosaso. Odayaasha iyo Siyaasiyiinta ayaa dhaliilay waxqabadka xukuiumadda Puntland, kadib shir ay ku […]
Xilli Muddooyinkii ugu dambeeyay xiisado siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayay deegaano katirsanb Gobolka Gedo ayaa waxaa dhinaca kale isa soo taraya dhaliisha iyo eedeynta loosoo jeedinayo Dowladda Kenya. Korneyl Aadan Axmed Xirsi oo loo […]
DAAWO:- DFS oo Xaqiraad ku sameeysay Qaar kamid ah Beelaha Dega Galmudug “Beel Cabanaysa”.
Kulan magaalada Dhuusamareeb ay ku yeesheen Waxgaradka mid kamid ah beelaha dega Deegaanada Galmudug ayay ku sheegeen in ay cabasho ka yihiin hab dhaqanka wasaaradda arimaha Gudaha iyo Guddiga Dowladda Somalila Farsamada maamul usamaynta Galmudug. […]
DAAWO:- Madaxda Mucaaradka Somalia oo Bilaabay in ay Gargaraacaan Albaabada Beesha Caalamka ee Muqdisho “Maxaa Cusub”.
Xilli wax kabadan Sanad ay inaga xigto Doorashada Madaxtinimada Somalia ayaa waxaa dhanka kale bilaawday dadaal ay Mucaaradka Somalia kubixinayaa sidii ay ku hakin lahaayeen Damaca Dowladda Hadda Taliso ee ah in ay waqti ku […]
DAAWO:- Yaa ka dambeeyay Geerida Haweeneeydii Baaraysay Weerarkii Alshabaab ay ka fuliyeen Dusit2 “Xog soo korodhay”.
Dowladda Kenya ayaa xaqiijisay geerida Monica Wambui Githaiga oo aheyd sarkaalkii ugu sarreeyey baaritaanka weerar Al-Shabaab horraantii sanadkaan ka fulisay Nairobi. Monica Wambui Githaiga oo aheyd xubin sare oo ka tirsan sirdoonka Kenya ayaa u […]
DAAWO:- Wasiir Abgaal “Masiirka Puntland waxba uma dhimi Karo Oday meel ka hadlay iyo nin Xanaaqsan oo uu Maseer hayo”
Wasiirka Maaliyadda ee Puntland Xasan Shire Abgaal oo maanta shir Jaraa’id qabtay ayaa si adag uweeraray siyaasiyiinta saluugsan habka shaqo ee Wasaaradiisa iyo siyaasadda ay ku socoto xukuumadda uu Hogaamiyo Madaxwayne Deni. Wasiirka ayaa sheegay […]
XOG Qarsoodi ah:- Kheyre iyo Beeshiisa oo isku haysta Xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug “Nin la diyaariyay oo la wato…”
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa qorshaynaysa in gudoomiyaha Baarlamaaka Galmudug ay kadhigto yaxye Cali Ibraahim oo ah Saragaal sare oo katirsan Wasaaradda Arimaha gudaha Federaalka iyo dib uheshiisiinta ee Dowladda Soomaaliya islamarkaana ah Xubin Muhiim ah […]